Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Medicines mostly used (4) အသုံးများ ဆေးဝါးများ (K to M)
Medicines mostly used (4) အသုံးများ ဆေးဝါးများ (K to M)
297. Kanamycin Sulphate သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ အူရောင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်မြှေး ရောင်ခြင်း၊ အသဲကြောင့် ဦးနှောက် ထိခိုက်ခြင်း၊ 500 mg TDS IV/IM; 1 Gm QID; 7.5 mg/kg TDS IV/IM; ဆီးလမ်း-မွေးလမ်း- အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ = 3-4 Gm weekly and 15-30 mg/kg IM/IV ဂနိုရီးယား၊ =2Gm stat ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အနီပြင်ထွက်၊ ခေါင်းကိုက်၊
298. Kaypen 125-250, Phenoxymethyl Penicillin Potassium = Penicillin V ပဋိဇီဝဆေး၊ နား အလည်ပိုင်း-အာသီး-လည်ပင်းရောင်၊ ဆုံဆို့နာ၊ လေပြွန်-အသံပြွန်ရောင်၊ (နူမိုးနီးယား) ၊ အသက်ရှူလမ်း-ဆီးလမ်း-အရေပြားရောင်၊ (ဆိုင်းနပ်စ်) ၊ ဆစ်ဖလစ်၊ (ဂနိုရီးယာ) ၊ သွေးထဲပိုးဝင်၊ ဦးနှောက်အမြှေး-နှလုံး အတွင်းသား-အရိုး-အဆစ်ရောင်၊ လေးဘက်နာ၊ ဒေါင့်သန်းရောဂါ၊ 250-500 mg QID; 12.5 mg/kg QID
299. Kemestin (Clotrimazole Vaginal) မွေးလမ်းကြောင်းမှိုဝင်ခြင်း ထည့်ဆေး၊
300. Ketalar, Ketamine = မေ့ဆေးထိုးဆေး၊ Anaesthetic Dose = 450-1000 mg IM, 50-350 mg IV; Onset = 3-5 minutes; Duration = 1.5 –2hours; Back to baseline = 4-6 hours; Children =5mg/kg IM 1.25 mg/kg IV ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အစားပျက်၊ အိပ်မက်မက်၊ အသက်ရှူခက်၊ နှလုံးခုန်မမှန်၊
301. Ketoconazole 200-400 mg with breakfast ဖန်းဂတ်စ် မှိုဆေး၊ Tinea Versicolor (Pityriasis Versicolor) ညှင်း၊ Ketoconazole 200 mg daily orally for 1 week or 400 mg asasingle oral dose စားဆေးပေးပါ။ တလကျော် ပေးရင် အသဲကို ထိခိုက်နိုင်တာမို့ Tinea Versicolor ကလွဲရင် မပေးတော့ပါ။
302. Ketoconazole shampoo 1% or 2% မှိုဆေး၊ ၃ ပါတ်ကြာအောင် လိမ်းပါ။
303. Ketorolac Migraine Emergency treatment (မိုင်ဂရင်း) အရေးပေါ်ဆေး 60 mg IM အသားဆေး၊
304. Lamivir (Lamivudine 100 mg), Lamidac, Lamivir HBV အသဲရောင်(ဘီ) ကုသရန်ဆေး၊ ခုခံအား ကျရောဂါဆေး၊ 100 mg daily ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ကြွက်သားနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ အအိပ်ပျက်၊ သရက်ရွက်ရောင်၊ သွေးနီဥနည်း၊
305. Lansoprazole = အူသိမ်အစပိုင်းလေနာ၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများကြောင့်ဖြစ်ရသည့်လေနာ၊ အစာလမ်းမှ သွေးယို၊ 15-30-40 mg OD အစာမြိုပြွန်ရောင်၊ ရင်ဘတ်ပူ၊ အစာခြေရည်အထက်တက်၊
306. Larpose (Lorazepam) စိတ်ငြိမ်ဆေး၊ အိပ်ဆေး၊ Adults: 1-2-3 mg HS; Adults: 1-4 mg daily in divided doses
307. Lasix (Furosemide or Frusemide) = ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊ ကိုယ်ရောင်-သွေးတိုးရောဂါဆေး၊ (20 mg BD and 40-320 mg in 2-3 doses) အရေးပေါ်သွေးတိုး ကျရန်။ အရေးပေါ် အဆုပ်ရောင်ခြင်း၊ Acute pulmonary edema IV ½ or 1 ampoule stat ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ရေ-ဆားနည်း၊ အစာအိမ်အောင့်၊ အစားပျက်၊ အားယုတ်၊ ကြွက်သားနာ၊ ကျောက်ကပ် မကောင်းသူ၊ အသဲမကောင်းသူ၊ (ဂေါတ်) ရောဂါရှိသူ၊ (လူးပတ်စ်) ရောဂါရှိသူ၊ ဆီးချို ရှိသူတို့အား မပေးရ၊
308. Levocetirizine (Lezen-Cold) = Antihistamine အင်တီ-ဟစ်တမင်းဆေး၊
309. Levofloxacin ပဋိဇီဝဆေး၊
a. 500 mg IV OD = ရက်တို ကျောက်ကပ်ပြွန်ရောင်ခြင်း၊
b. 500 mg OD x5days = ရှုတ်ထွေးသော ဂနိုးရီးယား၊
c. 250 mg BD Orally, 500 mg IV BD x 14 days = လေပြွန်-အသက်ရှူလမ်း-ကျောက်ကပ်-အဆုပ်-ဆီးလမ်း ပိုးဝင်ခြင်းများ၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ တီဘီ၊ အရေပြားနာ၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊
310. Librium (Chlordiazepoxide) 5-10 mg TDS/QID to20-25 mg QID စိတ်ငြိမ်ဆေး၊
311. Liquid Paraffin ဝမ်းနုပ်ဆေးအဆီ၊ Adults: 7.5-15 ml; Children5to 12: 5-10 ml; Children2to 5: 2.5-5 ml HS with water and if necessary, again in the morning or as required
312. Lithium carbonate, Valproic acid ကြောက်စိတ် bipolar disorders အတွက်ဆေး၊ Lithium (Eskalith, Lithobid), Valproate (Depakene, Depakote), Carbamazepine (Epitol, Tegretol), Lamotrigine (Lamictal) = စိတ်မူတည်ငြိမ်စေတဲ့၊ အတက်သက်သာဆေး။
313. Logi-Cal 200 ml = ကယ်လ်စီယမ်ဓါတ်ဖြည့်ရန်ဆေး၊
314. Lomefloxacin (HCl) (400 mg Daily Oral) ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ နာတာရှည်လေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ရောင်ခြင်း၊
315. Lomotil = (Diphenoxylate HCl + Atropine Sulphate) အူ၏လှုပ်ရှားမှု နှေးစေရန်သည့် ဝမ်းပိတ်ဆေး၊ Adult5mg TDS; Children 0.166 mg/kg
316. Loperamide (HCl), (Imodium) Adult =4to 16 mg 24 hourly followed by 2mg/dose after each stool upto max dose of 16mg/day; Paedriatic = (20 kg) 0.05 mg/kg QID အူ၏လှုပ်ရှားမှု နှေးစေသည့်ဝမ်းပိတ်ဆေး၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = အရေပြားနီ၊ ပျို့-အန်၊
317. Loracarbef ပဋိဇီဝဆေး၊ (0.4 mg) (Lorabid) 800 mg
318. Lorazepam = စိတ်ပူပင်ခြင်းအတွက်ဆေး၊ (1-10 mg Daily)
319. Lornoxicam = (NSAID) အနာ-အကိုက်ပျောက်ဆေး၊
320. Losartan (K), Cozaar (Angiotensin II blocker) သွေတိုး၊ နှလုံးအလုပ်မလုပ်ခြင်းအတွက်ဆေး၊ 2.5 to 100 mg daily = 50 mg OD and 25-100 mg in 1-2 doses
321. Lotrisone cream/lotion (Clotrimazole and Betamethasone) ဖန်းဂတ်စ် မှိုရောဂါ၊ မွေးလမ်းကြောင်း ထည့်ဆေး၊
322. Lugol's solution (Lugol's iodine) Antiseptic and Disinfectant ပိုးသန့်ဆေး၊ 10 parts of Potassium iodide,5parts of iodine, in 85 parts of water ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ ဆိုးဆေး အဖြစ် သုံးတယ်။ Lysol = disinfection of floors, bathrooms, washbasins, organic waste such as sputum, faeces, urine etc. သလိပ်၊ ဝမ်း၊ ဆီး၊ စသည်တို့ စွန့်ပြစ်ခြင်းကို သန့်ရှင်းရန်။
323. Magnesium Carbonate လေနာရောဂါအတွက်ဆေး 1,250 - 1,500 mg
324. Magnesium hydroxide and oxide = အစာအိမ်အက်စစ်ဓါတ်ပျယ်ဆေး၊ ဝမ်းချုပ်လျှင်လည်း ပေးနိုင်၊ 200 to 400 mg TDS တနေ့ ၃ ကြိမ်၊
325. Magnesium sulfate ဆားခါး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သွေးဆိပ်တက်ခြင်း၊ မက်ဂနီဆီယမ် နည်းခြင်း၊ Initially 1 to2g in 25% or 50% solution is given IM. Subsequently, 1 g is given every 30 minutes 1 to5g (2 to 10 mL of 50% solution) daily in divided doses, Children = IM 20 to 40 mg per kg of body weight ina20% solution အတက်ရောဂါ-ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကုဆေး၊
326. Mannitol ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊ = injectable solution, 10%, 20% ဦးနှောက်ထိခိုက်ပြီး ရောင်ခြင်း၊
327. Mebendazole = Albendazole သန်ချဆေး၊
328. Meclizine = Acute Periphreral Vertigo Emergency treatment ရုတ်ရက် အပြင်းအထံ ခေါင်းမူးရောဂါအတွက် အရေးပေါ် ဆေး 25 mg 8-12 hourly သောက်ဆေး၊
329. Mefenamic Acid; Diclomine HCl = အနာ-အကိုက်-အဖျား-အရောင် ကျဆေး၊ ကလေးများ ဗိုက်နာခြင်း၊ ရာသီလာစဉ်နာခြင်း 250-500 mg TDS/QID; မကောင်းကျိုး = အစာလမ်း-ဆီးလမ်းအလုပ်ကို နှေးစေသည်၊ ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း၊
330. Mefliam = Mefloquine 250 mg ငှက်ဖျားကာကွယ်ဆေး၊ Adults 1250 mg asasingle dose or 750 mg as one dose, thena500 mg dose 8 hours later; Children 20 to 25 mg/kg asasingle dose or two doses; Mefloquine 250 mg salt (228 mg base) stat and weekly3weeks before Malaria Prevention
331. Meglitinides (Glinides) ဆီးချိုစားဆေး၊
332. Menosan = သွေးဆုံးချိန် လက္ခဏာများအတွက်ဆေး၊ 1 BD x 12-18 months
333. Meropenem ဝမ်းတွင်း-သွေးထဲပိုးဝင်ခြင်း၊ အဆုပ်ထဲ ပိုးဝင်ခြင်း၊ မျိုးပွားလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ (500 mg TDS IV) (30 mg/kg BD-TDS IV) ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊ Meropenem (Merrem IV) 50 mg/kg
334. Metformin ဆီးချိုထိန်းဆေး၊ 500 mg BD The maximum recommended daily dose of metformin is 2550 mg in adults and 2000 mg in pediatric patients (10-16 years of age)
335. Methadone (မက်သဒုံး) ဓါတ်ခွဲခမ်းမှာ ထုတ်တဲ့ ဘိန်း။ အနာ-အကိုက် ပျောက်ဆေး၊ 20 mg QID အလွန် နာတာကို သက်သာတဲ့ဆေး၊ ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေးတွေမှာ သုံးတယ်။ ဘိန်းဖြတ်ရာမှာ (မက်သဒုန်း) က အသုံးကျပေမဲ့ Methamphetamine (မက်သ်မင်ဖက်တမင်း) Cocaine (ကိုကိန်း) ၊ နဲ့ အရက်ဖြတ်ရာမှာ အသုံးမကျပါ။ သွေးကင်ဆာကို ကုရာမှာ သုံးသေးတယ်။ မကောင်းသတ္တိ။ သွေးခဲမယ်၊ အသက်ရှူမဝ၊ ဝမ်းချုပ်၊ ချွေးထွက်များ၊ အိုက်တာမခံနိုင်၊ အားယုတ်၊ သူငယ်အိမ်ကျဉ်း၊ ပျို့၊ သွေးဖိအားကျ၊ အမြင်-အကြား သူများနဲ့ မတူတာတွေ ခံစား၊ ခေါင်းကိုက်၊ အန်၊ နှလုံးခုန် မမှန်၊ အစားပျက်၊ လူကဝ၊ ဗိုက်နာ၊ ယောက်ျား ရင်သားထွက်၊ လိင်တံမသန်မာ၊ အာခေါင်ခြောက်၊ ချွေးများ၊ မျက်နှာနီမြန်း၊ ယားယံ၊ ခြေ-လက်တွေရောင်၊ စိတ်ဂနာမငြိမ်ဖြစ်၊ မူပြောင်း၊ မျက်စိဝေဝါး၊ အိပ်မပျော်၊ အရေပြား အနီပြင်ထွက်၊ ဆီးသွားရခက်၊ တက်။
336. Methotrexate ကင်ဆာအတွက်ဆေး၊
a. (ရူမတွိုက်) အဆစ်နာပျောက်ဆေး၊ = 2.5 mg tablet
b. ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဘို့ Methotrexate ထိုးဆေးထိုးပေးတယ်။ ၅-၇ ရက်နေရင် ပြန်ခေါ်ပြီး၊ Misoprostol ဆေးကို (ဗဂျိုင်းနား) ထဲ ထည့်ပေးတယ်။ ၁-၂ ရက် အတွင်း ပျက်ကျတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ခေါင်းကိုက်၊ ပျို့၊ အန်၊ ဝမ်းပျက်၊ သားအိမ်နေရာကနာ၊ အားယုတ်၊ သွေးဆင်း များတာတို့ ဖြစ်တယ်။
337. Methscopolamine (Scopolamine) အစာအိမ်လေနာဆေး၊ တခြားဆေးများနှင့်တွဲပေးသည်။ အစာမရှိချိန်ပေးပါ။
338. Methyl Salicylate ဆေးက Wintergreen အပင်ကထုတ်ထားတဲ့ အဆီ။ Aspirin နဲ့ဆင်တဲ့ နာတာ သက်သာဆေး။ များသွားရင် မကောင်းဘူး။
339. Methyldopa ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်သွေးတိုးခြင်း၊ 250 mg BD and 500-2000 mg in2doses ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ခေါင်းကိုက်၊ အားယုတ်၊ စိတ်ကျ၊ နှာခေါင်းပိတ်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ ဝမ်းပျက်၊
340. Metoclopramide (HCl) 10-15 mg QID အအန်ပျောက်ဆေး၊ 10-20 mg IV, Migraine (မိုင်ဂရင်း) အရေးပေါ် ဆေး၊ သွေးကြော-ထိုးဆေး၊
341. Metoprolol = 50 mg OD or 25 mg BD; 100-200 mg BD (ဘီတာ-ဘလော့ကား) နှလုံး သွေးကြော ကျဉ်းရောဂါ၊ နှလုံးခုံနှုန်းမမှန်သည့်ရောဂါ။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ။ သွေးတိုး ကျစေသည်။ (မိုင်ဂရင်း) ခေါင်းကိုက်-ခေါင်းမူးရောဂါ၊ ခြေလက်တုံအကြောက်ရောဂါ၊
342. Metronidazole (မက်ထရိုနိုက်ဒဇော)
a. (ထရွိုင်ကိုမိုးနပ်စ်) နှင့် (ဂိုင်ယာဒီယား) ပိုးများကြောင့် မွေးလမ်းကြောင်း-သားအိမ်ရောင်ခြင်း၊ (2 g) တခါထဲ သို့မဟုတ် 250 mg three times daily for 7–10 days
b. (ဂိုင်ယာဒီးယား) ပိုးဝင်၍ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ 250 mg TDS x5days ကျား-မ ဆီးပြွန်ရောင်ခြင်း၊ 500 mg BD x7days
c. Metronidazole vaginal cream (0.75%) မွေးလမ်းထဲသို့ တနေ့ ၂ ကြိမ် ၅ ရက်ထည့်ပါ။
d. လေမကြိုက်သည့်ပိုး အူမကြီးရောင်ခြင်း၊ 500 mg TDS (30 mg/kg/dose) IV တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ စားဆေး-ထိုးဆေး၊ Adult oral dosage is 7.5 mg/kg every six hours x7to 10 days;
e. အူမကြီးရောင်ခြင်း၊ 500 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ စားဆေး-ထိုးဆေး။ အူမကြီးခွဲစိတ်ခြင်း၊ ဦးနှောက်ပြည်တည်ခြင်း၊ Cephalosporin နှင့် တွဲပေးသည်။
f. H pylori infections အစာအိမ်အနာ Clarithromycin and omeprazole နှင့်တွဲပေးသည်။
g. ခရီးသွားဝမ်းလျှောခြင်း၊ Metronidazole 250 mg TDS x 5-7 days
h. E histolytica (GE) အစာလမ်း (အူ) ရောင်ခြင်း၊ (အမီးဘား) ဝမ်းကိုက်၊ 400-800 mg TDS x 5-10 days; Children = 100-400 mg TDS
i. (အမီးဘား) အသဲပြည်တည်ခြင်း၊ 500–750 mg TDS x 5–10 days. Children: 35 to 50 mg/kg/24 hours, divided into three doses, orally for 10 days.
j. တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများပိုးဝင်ခြင်း၊ 500 mg orally BD x 14 days အခြားဆေးနှင့် တွဲပေးရသည်၊
l. ဦးနှောက် ပြည်တည်ခြင်း၊ 7.5 mg/kg orally QID not to exceed4grams daily + Penicillin or Cefixime, Cefdinir, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefpodoxime, Ceftazidime, Ceftizoxime, Ceftriaxone
m. ဆိုးကျိုးများ၊ အစာအိမ်ရောင်၊ ပျို့-အန်၊ အစာမကျေ၊
343. Mexiletine (HCl) 2.857-5.714 mg/kg TDS Oral နှလုံးရောဂါ (Attack, Stroke) ရခြင်း၊
344. Micafungin (Mycamine) 100 mg
345. Miconazole (ဖန်းဂပ်စ်) ခေါ် မှိုရောဂါလိမ်းဆေး၊ = ointment or cream, 2% (nitrate) ; 2% cream or 100-200 mg suppository OD x3days မွေးလမ်းကြောင်းထဲထည့်ရန်၊ အားကစားသမား ခြေထောက်၊ ပွေးအတွက်ဆေး။
346. Miconazole nitrate မှိုဆေး၊ ointment or 2% cream or 100-200 mg suppository မွေးလမ်းထည့်ဆေး၊ ၃ ည။
347. Mifeprex = RU 486 = Abortion Pill ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆေး၊ ကိုယ်ဝန် ရှိနေတာကို သေခြာအောင် စစ်ပြီးမှ ပေးရတယ်။ ကိုယ်ဝန် (၇) ပါတ်၊ (၈) ပါတ်၊ တချို့က (၂၄) ပါတ်အထိပျက်စေတယ်။ ပဌမဆုံး Mifepristone ဆေးကို 200 mg ၁ လုံး ပေးတယ်။ အရင်က ၃ လုံး ပေးတယ်။ Misoprostol 800 mcg4tablets ကို ပါးစပ်က ဖြစ်ဖြစ်၊ (ဗဂျိုင်းနား) ထည့်ဆေး ဖြစ်ဖြစ် ပေးတယ်။ တချို့က ၁-၂ ရက်ခြာပြီး၊ အိန္ဒိယမှာက ၅-၇ ရက်ခြာပြီး၊ FDA Updated regimen နည်းအရ ပဌမဆေး Mifepristone ကို ဗဂျိုင်းနားကနေ ပေးရင်၊ ဒုတိယဆေး Misoprostol ကို ၆-၇၂ နာရီမှာ ပေးတယ်။ ပဌမဆေး Mifepristone ကို ပါးစပ်ကကနေ ပေးရင်၊ ဒုတိယဆေး Misoprostol ကို ၂၄-၃၆ နာရီမှာပေးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဟာ ၄-၆ နာရီ အတွင်း ပျက်ကျလိမ့်မယ်။ သွေးဆင်းတာ ၇ ရက်ကြာနိုင်တယ်။ အောင်မြင်မှုနှုန်း ၉၂-၉၇% ရှိတယ်။
348. Misoprostol (Cytotec®) ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဆေး။ 800 mcg (4 tablets) (အရင်က 400 micrograms) ကို ပါးစပ်ကဖြစ်ဖြစ်၊ (ဗဂျိုင်းနား) ထည့်ဆေး ဖြစ်ဖြစ် ပေးတယ်။
a. Induced abortion ဝ-၁၂ ပါတ် ကိုယ်ဝန် ပျက်စေရန် 800mcg vaginally 12-hrly x3- Ideally used 48h after Mifepristone 200mg
b. Missed abortion ဝ-၁၂ ပါတ် ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျခြင်း ကုရန် 800mcg vaginal 3-hrly or sublingual 600mcg 3-hourly - Give2doses and leave to work for 1-2 weeks (unless heavy bleeding or infection)
c. Incomplete abortion ဝ-၁၂ ပါတ် တဝက်တပျက် ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျခြင်း 600mcg orally single dose
d. Induced abortion ၁၃-၂၂ ပါတ် ကိုယ်ဝန်ပျက်စေရန် 400mcg vaginally 3-hrly x5- Use 200mcg only in women with LSCS scar. Ideally used 48h after Mifepristone 200mg
e. Intrauterine fetal death ကလေး သားအိမ်ထဲ သေနေခြင်း 13-17 wks: 200mcg pv 6-hrly, 18-26 wks: 100mcg pv 6-hrly, 27+ wks: 25-50mcg pv 4-hrly - Reduce doses in women with previous LSCS
f. Induction of labor ကလေး အမြန် မွေးစေရန် 25mcg vaginally 4-hrly or 50 mcg orally 4-hrly or 20mcg Oral solution 2-hrly - Do not use if previous caesarean section
g. Cervical Ripening သားအိမ်အဝ ပွင့်စေရန် 400mcg vaginally 3h before procedure - Use for insertion of intrauterine device, surgical termination of pregnancy, dilatation and curettage, hysteroscopy
349. Migarid = မိုင်ဂရင်းရောဂါ၊ 5-10 mg daily for adults5mg daily for children အခြား အမူးရောဂါ၊ = 10 mg/day in adults and5mg/day in children အတက်ရောဂါ၊ ဝက်ရူးပြန် ရောဂါ၊ =5to 20 mg/day in adults and5to 10 mg/day in children
350. Milk of magnesia = Magnesium hydroxide အစာအိမ်အက်စစ်ဓါတ်ပျယ်ဆေး၊ Adults & children over 12 years = 7.5-15 ml, Children =2to5ml ဝမ်းပျော့ဆေး၊ လိပ်ခေါင်း၊
351. Minocycline: Adult 100 mg PO/IV q12-24h; Pediatric 2-4 mg/kg/d divided bid အရေပြားနာ၊ အနာဒဏ်ရာများ၊ နှလုံးအတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ အရိုးအတွင်းရောင်ခြင်း၊ အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ သွားအတု-အရိုးတု စသည်တို့ ရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊
352. Mipramine (Tofranil) 150-200 mg (max 300 mg) စိတ်ကျရောဂါ၊
353. Mirtazapine စိတ်ဓါတ်ကျနေခြင်းအတွက်ဆေးဖြစ်သည်။ အားယုတ်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း အတွက်လည်း ပေးနိုင်သည်။
354. Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) = Phenelzine (Nardil) နဲ့ Tranylcypromine (Parnate) စိတ်ကျရောဂါဆေး၊
355. Morphine (မော်ဖိန်း) ပြင်းထံသောအနာ-အကိုက်ပျောက်ဆေး၊ 5-15 mg4hourly IM နှလုံးရောဂါ (Attack, Stroke) ရခြင်း၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ဝမ်းချုပ်၊ မူး၊ ဆေးစွဲ၊
356. Moxifloxacin လူစုလူဝေးမှရသော နူမိုးနီးယား၊ 400 mg OD x 10-14 days
357. Muscle relaxants ကြွက်သား ပြော့ဆေး၊ အနာသက်သာစေရန်ပေးသည်။
a. Carisoprodol 250 mg to 350 mg TDS and HS,
b. Chlorzoxazone 500 mg TDS/QID,
c. Cyclobenzaprine5mg TDS,
d. Methocarbamol 500 mg3QID and2QID
358. Nafcillin အရိုးတွင်း ပြည်တည်ခြင်း၊ အရေပြားနာ၊ အနာဒဏ်ရာများ၊ နှလုံးအတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ နူမိုးနီးယား၊ အရိုးအတွင်းရောင်ခြင်း၊ အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ သွားအတု-အရိုးတု ရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊ Adult 1-2 g IV q4h; Pediatric 100-200 mg/kg/d IV divided q4h; Nafcillin 100 mg/kg